Bishii Juun 9th.2017, xoghayaha xisbiga dawlada hoose ee Yuhuan iyo kooxdiisu waxay yimaadeen YONGYU si ay u sameeyaan cilmi baaris.
Bishii Juun 9th.2017, xoghayaha xisbiga dawlada hoose ee Yuhuan iyo kooxdiisu waxay yimaadeen YONGYU si ay u sameeyaan cilmi baaris. Wuxuu si aad ah uga hadlay guusha ay gaartay YONGYU sanadihii la soo dhaafay, wuxuuna ku dhiirigelinayaa qof kasta oo ku fadhiya kursiga ka shaqeeya gawaarida iyo qeybaha mootada dayactirka inuu sameeyo baaritaan iyo horumarin
Marka loo eego falanqaynta goodcarbadcar, iibinta baabuurta ee suuqa Mareykanka bishii Maajo 1st 2020 ayaa lumisay kudhowaad 20% marka loo eego isla xilli ciyaareedkii sanadkii hore. Fiiri miiska xogta, iibka Hyundai wuxuu qiimeynayay qiyaastii 38% marka loo eego sanadki ugu dambeeyay isla bishaas. Iibinta Mazda waxay hoos udhaceysay 44% marka loo eego sanadkii hore isla ...
Kooxdayada iibka waxay kaqeybgaleen Bandhigga Automechianika Shanghai Show bishii Dec.3th.2019. Baaxadda ballaaran ee bandhigan ayaa soo jiidatay macaamiil badan iyo ganacsato. Xilligaas, xoghayaha xisbiga degmada Yuhuan iyo kooxdiisuba waxay yimaadeen YONGYU waab taagan. Si taxaddar leh ayuu u hubiyey qashinka ...